यी हुन् ससारक सबैभन्दा धनि ट्रम्प खस्किए, गेट्सलाई उछिन्दै शीर्ष स्थानमा बेजोस::kamananews
काठमाडौँ ।फोर्ब्स पत्रिकाले वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने संसारका धानीहरुको सूचीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प २२२ स्थान तल खस्किएका छन् ।
उनको कूल सम्पत्ति ३.५ अर्ब डलरबाट ३.१ अर्ब डलरमा झरेपछि उनी धनीहरुको सूचीमा पछि परेका हुन् ।
फोर्ब्सका अनुसार न्युयोर्कमा रहेको उनको सम्पत्तिको मूल्यमा आएको कमी र गल्फ कोर्सको आम्दानीमा आएको कमीका कारण उनको स्थान खस्किएको हो ।
धनीहरुको सूचीको शीर्ष स्थानमा अनलाइन कम्पनी एमाजोनका संस्थापक जेफ बेजोस रहेका छन् । गत वर्ष ३९.२ अर्ब डलर रहेको सम्पत्ति ११२ अर्ब डलर पुर्याउँदै उनले शीर्ष स्थानमा कब्जा जमाउन सफल भएका हुन् ।
फोर्ब्सको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो कमाई पनि हो ।
शीर्ष १० मा कोही पनि महिला पर्न सकेनन् । अमेरिकी रिटेल चेन कम्पनी वालमार्टकी एलिसा वाल्टन १६ औँ स्थानमा रहेकी छिन् ।
६. अर्मान्सियो ओर्टेगा, जारा – ७० अर्ब डलर
७. कार्लोस सिल्म हेलु एण्ड फ्यामिली – ६७.१ अर्ब डलर
१०. ल्यारी एलिसन, ओराकल – ५८.५ अर्ब डलर
देशको हिसाबमा अमेरिकामा सर्वाधिक ५८५ अर्बपतिहरु रहेका छन् । क्यालिफोर्नियामा मात्र १४४ अर्बपतिहरु रहेका छन् ।
३७३ अर्बपतिसहित दोस्रो स्थानमा चीन रहेको छ ।
युरोपबाट जमर्नीमा सर्वाधिक १२३ तथा भारतमा ११९ अर्बपतिहरु रहेका छन् । रसियामा १०२ जना अर्बपतिहरु रहेको फोर्ब्र्सले जनाएको छ ।
बेलायतमा भने गत वर्षबाट एक जना घट्दै ५३ जना अर्बपतिहरु रहेका छन् ।
फोरब्र्सका लुइसा क्रोल र केरी डोलानले धनीहरुको अझै धनी बन्दै गएको र गरिब र उनीहरुबीचको दूरी झन् बढ्दै गएको बताएका छन् ।
विनोद चौधरी १५६१ औँ धनी
नेपालका अर्बपति विनोद चौधरी विश्वको धनीहरुको सूचीमा १ हजार ५ सय ६१ औँ स्थानमा रहेका छन् । सिजी कर्पोरेसनका मालिक रहेका उनको सम्पत्ति बृद्धि भएर १.५ अर्ब डलर पुगेको फोर्ब्सले उल्लेख गरेको छ । हाल उनी नेपाल काँग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सांसद रहेका छन् ।
भारतमा मुकेश अम्बानी
यता, छिमेकी राष्ट्र भारतमा मुकेश अम्बानी शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । ४०.१ अर्ब डलर सम्पत्तिसहित उनी विश्वको १९ औँ धनी बनेका छन् ।
दोस्रो स्थानमा अजीम प्रेमजी, तेस्रोमा लक्ष्मी निवास मित्तल रहेका छन् ।
बुध, फाल्गुन २३, २०७४ मा प्रकाशित
कतारमा व्यवसायिक सफलता पाउने थुप्रै नेपालीमध्ये विकास प्रसाईं र अनु भट्टराईको जोडी पनि एक हो । कतारमा निर्माणदेखि रेष्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका विकास र अनुले भैरहवामा तीन तारे होटल निर्माणको तयारी गरेको छ...